Calii Calanqoo: Beekaa Irra Kutne Malee, Seenaann Hiyyeeysa Hinqabuu Oromia Shall be Free |
bilisummaa March 2, 2015	Comments Off on Calii Calanqoo: Beekaa Irra Kutne Malee, Seenaann Hiyyeeysa Hinqabuu
Bitootessa 1, Br 2015, Jaafar Ali, Norway Irraa
Ja’a Alii Birraa bar kurnee afur dura irraa jalqabee hoggaa alalaasu. Dhuguma isaati seenaan hiyyeeysa hinqabu. Beekaa irra kutne kan ju’u laalchisee ammoo karaa hedduun xiinxaluun nidandayama. Tuffatneeti irra kutnee, jechuu isaati, akka hinjenne, nama tahee kan of tuffatu inima hinjirre. Sodaatneeti usne, jechuu isaati akka hinjennees, Oromoon gootummaa malee luynummaa dhaan akka hinbeekkamne, Calii Calanqoo qofa maqaa dhahuun gayaa dhaa oli. dhaadannoo muummittii gaafa sirna gadaa, tan maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa, jettuus dabalatee, injifannoo adwaa kan Xaayituu Buxxulii fii Ras Aliin hooggananiis tahe, achii asiis seenaa lolaa kan Ethiopia keeysatti jabduu gurguddoo ar’aan tana habashootni boonaniin harka caalaa kan galmeeysan irreeyyii fii lafoo oromoo akka tahan eeruu caalaa ragaa biraa tarreeysuun hinbarbaachisu. Walumaagalattuu, eega lola baarudaa fii habalee jiddutti godhameen caphee asiis tahu, hamma fedhees dhimamu, oromoon gamtaaniis tahe matayyaa dhaan falmachuu dhiisee takkaa duuyda isaa shiireysee akka hinbitamin seenaan irra daddeebi’eeti ragaa bahaafi. Caliin Calanqoo tiis kan mirkaneeysitu kanuma. Kanaafuu Dr Alii Birraa beekaati irra kutne malee, jechuun isaa, sodaatneeti usnee, jechuuf akka hintahin hubachuun nama hindhibu. Eegasiifuu maal jechuu isaati!? Yo ja’ame innumtuu walaloo itt aantu keeysatti beekaa irra kutne malee garaan fayyaa nu hinqabuu, jechuudhaan maal jechuu akka barbaade kan ibse natti fakkaata. Dhalootni ammaatiis sirna roorrisaa san akka lamuu kabsachuu hindandeenyetti unkuteeysuu daran, haluu bahuudhaaf tahuu baatullee, irraa barachuu dhaaf jecha, godaannisa roorroo sanii dhalootaaf dabarsuuf, siidaa Grl. Taaddasaa Birruutiis dabalatee, kan Harma muraa Aanoleetiis tahe kan Calii Calanqoo tii fii kanneen biraatiis dhaabuu dhaan, seenaa ofii irra taruun akka hindandayamne, jechaan osoo hintahin hujii dhaan mirkaneeysuu irratti argama. Tarkaanfiileen seena-qabeeyyiin kuniis kan jalqabaa malee isa maayyii akka hintahin shalaguun nama hindhibu. Ijoon barruu tanaatiis jaarmaya siidaa yaadannoo gootota Murtiguutoo sababa godhachuu dhaan seenaa Calii Calanqoo gaggabaabsinee gilgaaluuf hoggaa tahu, Calanqoo Lolaa ykn Caliin Calanqoo ykn seenaan Murtiguutoo maal fakkaata laata?
Lola Walloo hadhaawaa fii dheeraa kan baroowwan osoo hintahin jaarraallee marmaarfateen hangafee, Shira Goobanaa Daceetiin hoogganamu kan lixaa fii walakkeeysi oromiyaa akka gabbaran ittiin taasifamanitti aansee, seenaa oromoo keeysatti juuzni diilalleeysaan tokko murruqii Azullee ykn harma muraa fii harka muraa Aanolee hoggaa tahu, Weerartootni nafxanyootaa lola arsii kan gadaa tokko laawwate booda fuulli isaanii gama harar ykn akka waamicha gaafasiitti gama Fugug ture.
Fugug jechuun sansalata tulluu ykn duuyda gaaraa kan Gubba Qorichaa irraa kaasee hamma Kaarra Marraa tti baha oromiyaa qaxxaamuru hoggaa tahu gaafas naannoon kun Fugug ja’ameeti beekkama ture. Eega sirni gadaa waaltinimmaan isaa raaw’atee bifa confederacy tiin mootummoota naannoo jaarrachuu eegale boodaas nannoon kun Odaa Bultum maadheeyfachuu dhaan bulchiinsa mataa isaa kan Raabaa-doorii Bultum ja’amuudhaan beekkamu qabaachuu akka ture yaadannoo bar dhibbee dabreeti. Bulchiinsi Bultum kan Laga Hawaasii gaditti hornogamullee, naannoo isaatti sirna gadaatiin taligamuu ture kuniis walakkeeysa br. dhibbee 18fa keeysa weerara arabootaatiin bakka lamatti gargar cituu dhaan godinni amma harargee bahaa ja’amee beekkamu kiyyoo humnoota Turko Egiptian jala hogga kufu gamni lixaa garuu yeroofillee tahu dandamateeti ture. Mataan weerarartoota nafxanyaa minilik 2fa tiis eehama warra lixaa irraa helee wajjiin eega arsii dhunfate booda bakki inni dura weerarees lixa harargee ykn Ona Ituu kana ture.
Weerarri Ituu kan adeemsifame boqonnaa sadihiini ture. Kan duraa isa gama Arsiitiin dhufe hoggaa tahu kan hoogganamuus irreeysa nafxanyaa ol’aanaa Charinnatiini ture. Haatahu malee humna oromootaa kan jiraa Ituu Yaayyaa Alii Sireetiin durfamuun waan injifatamaniif matuma galeehuu bakka Arba Guugguu ja’amtu bira taruu hindandeenye. Kan lamadaa kan adeera Miniliik, Iraas Daargee dhaan hoogganamuu fii ona karrayyuu irraan gama laga Hawaas dhufe hoggaa tahu gama oromootiin kan dura dhaabbatte gameeysa Bultum beekkamaa, Mucee Ahmed Muceeti ture. Muceen humna daran nama tooftaadhaan lolu akka tureetu himamaafi. Akka manguddoon Ituu ammallee seeneysanitti, Muceen gaafa lola Arba Guugguutiis Charinnatii waliin marihatee tii fii nafxanyoota amansiisee, dura bu’ee fiduudhaan martii gaammee Yaayyaa Alii Siree keeysa galchuudhaan haabeen isaanii osoo hinhafin akka dhuman taasisuu caalaa lola tulluu fantaallee irraa hamma laga hawaasitti gaggeeyfame kan inni mataan isaa hooggane keeysattiis kanniisaanillee itti duuluudhaan tooftaadhaan akka injifate niseeneyfamaafi.
Yeroo saniif barruu qabaachuu baatanillee afseenaa gaafasii keeysa mirriga Ituu kan
Jarri waa karaa hinbeekuu, Mucee siitu daddeemaanii,
Kanniisaan itti duulan yaayyaa Alii Siree faanii,
Lafeen warseeysaa hincaphxuu walumaan cabsanii,
Oromoo lammii tiyyaa waliin nucabsanii.
Ju’u faa akka ragaatti lakkaawwachuu nidandeenya.
Weerarri sadeffaa kan Generaala Miniliik beekkamaa Dajjaazmaach Waldagabrieel Abbaa Seexaaniin hoogganamuu fii humna cimtuu dannabsee Hawaas qaxxaamure hoggaa tahu gama oromootaatiin kan dura dhaabbate Abbaa duulaa kan mootummaa Bultum ittisaa roobaati ture. Lolli kan gaggeeyfame lafa Bordodde ja’amtu irratti hoggaa tahu Ittisaa Roobaatiis dabalatee wayyabni oromootaa rasaasaan waan dhumaniif waldagabreen gama haranfama ciroo furga’uu dandayeeti jira. Manguddichi Ituu tii fii qondaalli Bultum, Mucee Ahmed Muceetiis kan boojihame Ciro irratti hoggaa tahu, Waldagabreen maaliin akka isa adabu itti rakkachaa eega ture booda karaa guddaa keeysatti mormaa gad awwaalee loon akka irra bobbahan godhuudha murteeyse. Akkuma murtii isaatti mormaa gad eega awwaale booda waan dhaammattu yoqabaatte jennaaniin gurrattiin sitti himaa natti gad ji’i je’eeniiti hoggaa Waldagabreen jilbbiiffattee gurra isaa afaan bira fiduuf ol hiixatee gurra Waldagabree hundetti irraa ciqqaawe ja’ama Muceen ilkeedhaan. Aara saniin bakka awwaalametti akka gufuutti babbashaysanii ajjeesaniis irraahuu gabaabsanii, achiin booda dooluu gurra isaa dhokfachuuf jecha gulula marachuu mudate ja’ama Walda Gabreen. Hakaaffataan Ituutiis qalama qabaachuu baatullee,
Walda Gabreen Amaaraa kan mataa bututtuu dhaa,
Amaaraan goftaa jennee sakaraata lubbuu dhaa.
Je’eeni darashii guuzaa keeysatti.
Walda gabreen aarii tanaan qotee bulaa fii tiikfattee ituu irratti roorroo hadhooytuu gaggeeysuu caalaa oromootni garaa isaaniitiif bulanii bassaasummaa dhaan Ituu raasan hedduun waan jiraniif,
Elemtuu diida Niinnii jabbiin duraa duutee,
Gogaa jabbii sanii jabbii biraa gootee,
Tolchi nitolchinaa jabbii mii Tolee dhaa,
Obsi niobsinaa dubbii akka maleedhaa.
Jetteeni ja’ama dubartiin Ituu hogga qooshaa daaktu dukkoo keeysatti.
Tolee jechuun akka loqoda diida Niinniitti, Intalishee ameeysa jabbiin jalaa duuteen cophsiifachuuf gogaa jabbii sanii citaa itti guutanii tii fii mataa fii mancee itti baasanii, jabbii fakkeeysanii jala dhaaban san tahuu isiiti.
Lolli ituu kan waggaa tokkoo fii ji’a jahaa kana booda fuulleen weerartootaa gama harargee bahaa ykn ona Afuran Qalloo hoggaa tahu, akka oborraa gayanittiis bakki isaan qubatan teyba olkaatuu gaara Gondolaa tii fii tulluu Obbii jiddutti arkamtuu fii Mudhii Bulee ja’amtu gubbaa dha ture. Gaafana walda Gabree qofa osoo hintahin qondaalli ol’aanaan nafxanyootaa, kan Miniliik eeysuma tahuuf, Raas Mokonniniis ajaja xaayituutiin duula kana hoogganuuf waraana kumaantamaan lakkaawamu dannabsee waan dhufeef jiraattotni Mudhii Bulee hundinuu naannawa san lakkisanii akka godaanan hoggaa taasifaman warri maaliif? Je’e uuda irratti walitti qanbamanii tti akka shoobdootti uleedhaan feeddagaman. Lafti suniis Mudhii Bulee ja’amuun isii haftee hamma ammaatti Muddhii Ulee taatee hafuun isiitiis achii asi ja’ama. Seenaa kanaas,
Dadarii daaddiftaa mudhii bulee dhaa tii,
Tan duriin walliftaa mudhii ulee dhaa tii.
Jechuu dhaani dhalootaaf dabarse wallisaan darruu shaggooyyee keeysatti.
Yeroo waraanni Mudhii Bulee ykn Mudhii Ulee battala godhatee jiru kanatti masaraa Inxooxxoo keeysatti mariin dheertuun akka adeemsifamte nihimama. Sababni marii tanaatiis muuyxannoo Arsii tii fii jiila Ituu irraa ka’uudhaan humna Afuran Qalloo tan Addeellee maadheyfatte argamtu akkamiin injifafachuun akka dandayamu irratti tarsiimoo karoorsuuf ture. humniti afuran qalloo tan Ituutii ol akka taate amanamullee, kan arsii caalee osoo hintahin, akka Xaayituun xinxiltetti,
-Lola Arabaa wajjiin gaggeeysan irraa kan ka’e muuyxannoo cimtuu waan qabaniif,
-Eega arabni bahe booda sababa amantii isaaniitiifillee tahu Amiirota Adaree Biyyoo wajjiin hariiroo gaarii waan qabaniif,
-Humnootni Adaree jibir tahanillee madaafaas dabalatee qawweelee hamma tokkoos waan qabaniif,
-Bulchiinsa Araboota jalatti Somaalota Ugaadeen, kan Ishaaqii fii Iissaa wajjiiniis caasaa takka jalatti buluudhaan walhubannoo hamma tokko waan horataniif,
-Somaalota duubaaniis humnootni abbaa irree kanneen akka Ingiliizii fii Xaaliyaanfaan itti dhihoo waan tahaniif,
-Humnootni kun akka waliigaltee Barliinitti Miniliikiif eehamanillee, naannoon kun dhihana magaalaa kan akka buna, loon, daadee arbaatii fii gogaa qeeyransaafaan kan duroome waan taheef saaqa isaaniitiin hidhannoo ammayyaa horachuuf carraa waan qabaniif,
-Yo lolli kun dheerate ammaas humnootni Awrooppaa kun qabeenya naannoo kanaatiin hawatamanii ofiif dhunfachuuf yaaduun isaanii waan maluuf,
-Sababoota kanneen hundaa wajjiin Fugug irratti yoinjifatamne jarri kun achitti nuijalaa hafuu dhabuu caalaa gaafa dheefaan shawaa seene jinniin rafte hundi nutti dammaquun waan maluuf, Gaallaan hinamanamtuu, kanneen nagayaan gabbaran jennuun hundi bakka takkaa nutti duulanii ankoobarrittuu duraa bahuu akka hindandeenye dagachuu hinqabnu.
Kan ju’uun lolli kun yeroo gabaabaa keeysatti xumuramuu akka qabu murteesaniiti gama Amiir Abdullaahii, Amiirticha Adaree ykn Hararii tiin Wadaay Galmoo Kormoosoo, Abbaa Gadaa Raabaa Doorii Bultum kan yeroo sanii tiif xalayaa barreeysan. Ijoon xalayaa tanaatiis nagayaan akka gabbaran gaafachuuf hoggaa tahu, keeysumattuu akka jecha isaaniitti Gaallaan akka hinamanamne eeruudhaan Amiir Abdullahi gama isaanii goree waan biraa yohanqate bassaasummaa dhaan akka isaan gargaaruu fii yo kana godhe akkuma warra nagayaan gabbare hundaaf hayyamametti inniniis mootii mootowwanii tahuu Miniliik beekee naannoo kana irratti ammoo mootummaan isaa akka hintuqamne kan ibsuu fii yo kana didan ammoo akkuma Arsii fii Ituu hundatti adabni hadhaawaan akka isaan eeggatu kan dinniinu ture. Gaafiin tun gama Raabaa Doorii Wadaay Galmootiin hoogganamtu tan Addeellee madheyfattee jirtu biratti aarii guddaa kaasuu caalaa Amiirticha birattiis tahu fudhatama waan hin arkatiniif, eega Mudhii Bulee qubatan ji’a jaha booda, waraana Raas Mokonninii fii Waldagabreen harkaa qaban kan 30,000 tti shalagamu gubbaadhaan Miniliik mataan isaa waraana 15,000 niin dabaalamee akka dhufu taasifame. Akka Miniliik dhufettiis lafti dhooqaa, bal’oonii fii gaarraniin marfamte, tan dhukaasni madaafaa argachuu hindandeenyee fii qubsuma mootichaatiif mijjooytu filamteeti Calanqo qubatan.
Amiir Abdullaahiis xalayaa isa dhaqqabde tana ugaazota somaalee kanneen dhiheenyatti argamaniis dabalatee, Abbaa gadaa Wadaay Galmootiifiis erguu caalaa lolaaf murteeyfateeti qophii mataa isaa kan jalqabe. keeysumattuu Abbaan Gadaa Wadaay Galmoo gama malkaa hundaa ajaja dabarsuudhaan dhiirti umriin isaanii lolaaf hayyamtuuf hindi yeroo gabaabaa keeysatti Hara Yaabataa irratti akka walgayan taasise.
Akka ragaan barruu tan mataskaana kaatoolikaa isa Qbbanaawaa jiru maqaa dhahuudhaan galmeeffamte eertutti yeroo weerartootni Miniliik 2fa waraan madaafaas dabalatee takka dhooytuu kumaantamaan lakkaawamtu hidhatanii Calanqo irratti battala qabatanii turan tanatti goototiin Oromootaa kanneen Abbaa duulaa Baka Waareetiin hoogganamanii fii lakkoofsaan hammas hinhanqannees madaafa Amiir Abdulaahi shanan tokkoo fii qawwee 100 hincaalle malee mi’a biraa qabaachuu baatanille, dandayamu waliin injifachuu fii hanqattuus osoo wal irraa hindheeysine waliin wareegamuuf irbuu waliif seenaniiti MURTIGUUTO maqaa ju’u mogaafatan. Eeboo fii habalee isaaniitii wajjiin fageenya km 30 irratti Hara yaabataa madditti walgayaniiti qophii mataa isaanii ittifufan. Mataskaantittiin kaatoolikaa tan Qabbanaawaatiis muddaminsa kana laguudhaaf jecha manguddumma jalqabuun isii hin oolle. Manguddummaan tuniis kan fashalte gama Miniliikiin Raas Mokonin nagayaan yogabbaran malee ejjannoo jettu qabachuu caalaa gama Wadaay Galmootiiniis taatu keeysumattu Abbaan duulaa Bakar Waaree maqaan badduu mannaa mataan badduu wayya ejjannoo jettu waan qabatreef hoggaa tahu kana booda wanni dadaa hanqatteeti daranuu muddaminsi sirane.
Ejjannoon Bakar Waaree loltoota Murtiguutoo kanneen Hara Yaabataa irratti walgayanii argaman biratti fudhatama guddaa argachuu caalaa, mooraa nafxanyootaa tan calanqotti bu’uramte keeysattiis shoorarkaa gudduu uumuu hin oolle. Kanuma irraa ka’uudhaan Miniliikiis yo Xaayituun dhufte malee kophaa isaa lola seenuu hinbarbaadne ture. Akkuma beekkamutti niitiin isaa Xaayituun mana eeyduu isaa osoo hintahin mala dhooytuu isaa waan taateef gaafa dubbiin jabaatte isiidhaan malettii hinsossoohu. Xaayituuniis ayyaana dhaloota goftaa iyyasuus kiristoos eega dabarsite booda waraana hamma tokko dabaltee akka dhuftu mirkananeeysiteete hamuunaan eeguu jalqanab. Tanaa fii tana jiddutti haalli hin eeggamin tokko isaan mudate.
Guyyaan aduu ayyaana dhalootaati ture. Ayyaana gannaa kan kan br 1886. ALH tti taahsaas bultii 27 tahuu isaati. Torbaan waaxiqqoon dura irraa jalqabee qophii gochaa waan turaniif hujiin guyyaa kanaa nyaataa fii dhugaatii dhiheeysanii ittiin bashananaa ayyaana kana miidhasuudha ture. Haatahu malee waaree ykn orraa irratti foon dheedhiin waraanaaf waan hanqateef gantuu Murtiguuto keeysaa isaanitti dabalame, Ali Galmoo, ifdura buusaniiti bakka qubsuma nafxanyootaa irraa gama Murtiguutootti km 7 hincaallee fii Calanqoo Haraa ja’amtu dhaqanii sangoota oromootaa kan baqaaf achitti argamu a’auudhaaf sossoohan. Akka tasaatti eega Ali Galalmoon gane booda Loltootni Murtiguutootiis Yaabata irraa gama Laga Laaftoo ykn jecha achii asiitiin Calanqoo Lolaa, fuuldura sossoohuu daran, Bakar Waaree mataan isaatiis ilaaloodhaaf naannawa kanat waan argamuuf, Ali galmoon eegee kofa kaayee tinfa bahullee nafxanyoota kurna tokko akka bisingaatti morma shalabaniiti balachuu ayyaanaa san balaa dhatti jijjiiraniifi.
Hoggaa kan dhagayu Miniliik isaa duraanuu sheeyxaanaa Ibliis achi aanu san taheeti, afeerra dhaabee lola labse. Akkaatuma kanaan tooftaan lolaa duraanuu karoorfamtee waan jirtuuf goblaa bitaa kan mirgaa tii fii fuulleedhaan fuuldura sossoohaniiti martii qil godhaanii dhukaasa banan. Dhukaasni kun isaanii ifirraa quba hinqabne waan taheef Murtiguutoof dhukaasa lafaa osoo hintahin bakakkaa samii irraa gadi roobdu fakkaata ture. Nama qofa osoo hintahin faradoon lolaatiis irra guddaan isaanii waan dhumaniif Murtiguiuto waan isaan mudateehuu hubachuuf yeroo hin arganne turan. Abbaa Gadaa Wadaay Galmoo Kormoosootiis dabalatee hoogganootiin ol’aanoon wayyabni isaanii guyyuma kana kufan. Akkasumaa wajjiin loltootni Murtiguutootiis madoo irraan gama reefkaa tarkaanfachaa tii fii gama madaafaa furga’uu dhaan nafxanyoota hedduu galaafachuu caalaa gama fuullee Qubbii Roobaa Qunbii ykn Qullubbii tiin hulee takka banachuu dandayaniiti turan. Dhiha irratti jiirkaan roobaa guddaan tokkoos waan gargaareef loltootni hammi tokko martii keeysaa bahuuf carraa argachuu hin oolle. Akkaataa sakattaa borumtii gantoota akka Ali Galmoo fii Kabiir Aadam Qusaa faan Laga Laaftoo irratti gaggeeyfamteettiin Amiir Abdullaahii fii Isaaqoo argoobbaafaa warra Yaabata ture kanneen akka dhukaasni banametti Aammadee Waleenbootii wajjiin baafate malee, Abbaa Barcumaa Roobaa Gaamootiis dabalatee goototiin beekkamoon akka Mareeny, Orfoo fii kkf hundi warra reefki isaanii lakkaawame keeysaahi. Abbaan Gadaa wadaay Galmoo Kormoosoo akka jabaa madaahullee lubbuudhaan qabameeti ture. Wayta Kabiir Aadam dhaqee isaa bishaan laga laaftoo maddiidhaa sakaraatu itti dhaadachaa dhumtaniimii kunoo ju’uun Wadaay Galmoo shahdaa qabachuu dhiisee BAGA DHUMNE osoo ju’uuti lubbuun keeysaa baate. Bishaan suniis hamma ammaatti BAGA ja’ameeti beekkama. Hulee takkitti banamteen Bakar Waareetii wajjiin kan bahe yojiraate Qondaala qondaalannii ykn Itti aanaa Abbaa Bokkuu Ibroo Shaxaa tii fii lafoo hamma tokko qofa turan.
Borumtii irraa jalqabee Ibroo Shaxaa addeela hundaan miila qa’aa gad dhiisee dirmachuu garayyu irraa gama Laga Laaftoo dhuftu waraanatti akka dabalaman taasisuu irratti hoggaa bobbahu Bakar Waareetiis loltoota isa dhaqqaban Duusee irraa hamma Qullubbiitti dhawaataan ramadeeti tooftaan lolchiisuu ittifufe. Akka dabtaraan nafxanyootaa barreeysanitti lola daqiiqaa 10 ykn kan akka barreeysitootni gariin ragaa malee barreeysanitti lola cinaa guiyyaa osoo hintahin lolli kun ALH Afraasa bultii 27 guyyaa gannaa Laga laaftoo irratti jalqabameet ji’a itti aanu Amajjii bultii 19 guyyaa Gabreelii Qullubbii irratti xumurame. Ibroo Shaxaatii fii lafoon hammi hafaniis kan dhuman lola qullubbi kana irratti ture. Lola hadhaawaa qawwee fii eeboo jiddutti aduu diiddamiif gaggeeyfame kanaaniis gama oromootaa irra yoxiqqaate 25,000 yo guddate 35,000 murruq tahuun isaani gaddaan seeneyfama. Laga Laaftoo jechuun haftee Calanqoo lolaa ykn Calii Calanqoo moggaafamuuniis kanumaafi. Okkoynaan ona meettaa tan,
Girgirii Calanqoo tan bultii diiddamii,
Qawween dim dim jettii madaafni dirgimii,
Keenyumaatu nufixee qarxam taane damii,
Tokko garaad alii kuun Kabiir aadamii.
Jettuus afseenaan kun kan dhugaa guddaa ifkeeysaa qabu akka tahe raggaasa.
Bakar Waaree ammoo guyyaa kanaas hinkufne. Beekee osoo hintahin isaa fii fardi isaatiis ciinccaa baarudaatii fii shurufkaa reefka bubbuleetiin machaawanii waan turaniifi fardi ajajamuu dhiiseeti karaa irraa dhufe qaceeleeni. Fuullee gama dabbaaliin bakka ammallee IYYA ja’amtee beekkamtu hogga gayu dubartootaa fii joolleen lola kana as caqasaa turan itti iyyaniiti farda dhaabsisanii simatan. Jiraa isaanii lubbuu dhaan arkuu isaaniitiif gammadanillee miila isaa arginaan rifataniiti eeysatti muramte ja’aniini. Inni ifiifuu amma hoggaa isaan gaafatan arguu isaa waan taheef ajaaiba itti taateete ACHIBUUTE je’eeni ja’ama. ACHIBUUTEE MIILA BAKAR jechuuniis kan dhufte sababuma kanaan akka ture niseeneyfama.
Gootni goototaa, Bakar Waaree wal’aansa aadaatiif gama Fadis geeyfamuus, eega Amiir Abdullaahiis dabalatee Isaaqoo Argoobbaa tii fii Aammadee Waleenboofaan harka kennatanii maaraman boodaa tahuu isaatii, abdii osoo hinkutatin, dirmachuu faffacaatee jirtu sassaabbatee akkanumaa wajjiin nafxanyoota Adaree Biyyoo qubatee jiru iratti lola biraa banuudhaaf osoo qophii lamadaa irratti argamuuti ture ji’oota shanan tokko booda duula nafxanyootaa kan odeeyfannoo argatee itti bobbaheen hordoftoota isaa 3000 hinhanqannee wajjiin kan galaafatame. Bakki suniis achii as Miidhagaa Lolaa ja’amteeti beekkamti. Calii lamadaa tii fii tan maayyii tahuu isiiti.
Zabana boodaa kana maqaan Miidhagaa Lolaa ju’u sun jijjiiramee Miidhagaa Tolaa akka taheen dhagayaa jira. Tola jibbee osoo hintahin godaannisa seenaa keenyaa waan taheef jijjiiramuu hinqabu je’eetiin amana. Akka ilaalcha kiyyaatti maqaa jijjiiruu osoo hintahin akkuma Callii Calanqoottii siidaan dhaabbachuuf qaba. Yo hubannoo kana dhabuu irraa kan mudate tahees dafee akka sirraahuu fii bu’urri siidaa akka lafa kaayyamuufiin miilanaan dhaammachuu barbaada.
Maayyii irrattiis walaloo shaggooyyee ykn Ammalelee dur keeysaa walitti funaanaman fii kitaaba kiyya kan DUBBII MIILA BAKAR ja’amu keeysatti kuusaman keeysaa tan itti aantu tana dabaluudhaaniin barruu tiyya goolaba.
Halasnaa Bordoddee haloo Aanolee dhaa,
Simaabaluu Ciroo tan Mudhii ulee dhaa,
Yaa Miidhagaa lolaa Calanqoo calii dhaaa,
Waa dheengaddaa mitii ar’aa mii kalee dhaa,
Kaleen ar’aa mitii nattuu ammallee dhaa.
Siidaa yaadannoo Murtiguutoo sababa godhachuu dhaan,
Bitootessa 1, br 2015, Jaafar Alii, Norway irraa
Tags Calanqoo Lola Oromootv seenaa Walloo
Previous VOA: seenaa suukanneessaa jiruu baqattoota Oromoo..
Next Yaamicha Kora Hawaasa Oromoo biyya Suweedin